Xudur deegaano hoos yimaado oo Al-shabaab laga saaray – Radio Muqdisho
Xudur deegaano hoos yimaado oo Al-shabaab laga saaray
Ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Koonfur galebed ee Soomaaliya ayaa maanta howlgallo ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada Xudur waxa ay kula wareegeen deegaanno dhowr ah oo ay Shabaabku ku dhuumaaleysanayeen.
Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen tuulooyin hor leh oo hoos yimaada degmada, isagoo intaa ku daray in maleeshiyaadkii Shabaab way isaga carareen ka hor inta aysan ciidamadu gaarin tuulooyinka ay saaka la wareegeen.
“Howlgalladu way socdaan, waxaana ay ciidamada ku suganyihiin Tuulada abaq-beedeey iyo tuulooyin kale oo degmada hoos yimaada, tuulooyinkan waxa ay ka midyihiin goobihii ay Shabaabku dadka ku dhibaateyn jireen, haatana ciidanka ammaanka ayaa ku sugan oo sameynaya howlgallo amni xaqiijin ah” ayuu yiri Guddoomiyaha degmada Xudur.
Sidoo kale Guddoomiyaha degmada Xudur ayaa sheegay inay sii wadayaan howlgallada lagu baacsanayo haraadiga Al-Shabaab, si guud ahaan gobolka looga cirib tiro.
Barlamaanka oo maanta ka doodaya sharciga xuduudaha
Wasaqda lagu shubo Xeebaha dalka oo laga digay